Yaphula iphasiwedi ye-VBA macro kwiMicrostation -Geofumadas
NgoNovemba, 2016 Ukulanda, Microstation-Bentley
IsiSeko esiBonakalayo seZicelo luthotho lwamathala eencwadi athe uMicrosoft wawenza ukuba afumaneke, ephelelwe lixesha kodwa enamandla kakhulu, ngakumbi kwiinguqulelo zeOfisi ngaphambi kuka-2010. Nangona isaqhubeka ukubakho, uninzi lophuhliso ngoku lwenziwe kwiNET nakwezinye iindawo; Nangona kunjalo, kuphuhliso olusekwe kwisakhelo, i-VBA sisisombululo esisebenzayo nakwifayile ye- Icala le-Microstation, elilula. Ubuncinci ndiyakhumbula ndithetha ngale nto ngokubonisa imephu eboshwe kunye nento XFM.
Le ngenye yeengxaki ezifikile kule ntsasa, ngelixa zihamba ngeenxa zonke zeNdlovukazi, kwikhaya elitshatayo:
Uncedo: Xa ndiqhuba i-VBA, umyalezo ubonakala:
«Ulwazi lokufumana iilayisensi leli candelo alifunyenwanga. Awunamalungelo aneleyo ngeli phepha-mvume lokusebenzisa lo msebenzi kwimeko yophuhliso.
Zininzi iindlela zokujikeleza le ngxaki, kubandakanya nokufaka iphakheji yokufumana into encinci njengaleyo ikhutshelwe iXM. Ingxaki apha kukuba, xa usebenzisa uguqulelo lweWindows 8 okanye Windows 10, iilayibrari ezindala azisebenzi kwaye ngokuqinisekileyo le VBA yakhiwa ngaphambi kuka-2010.
A yokucombulula: Faka Visual Basic 2010 Express, akayi le khompyutha imali eninzi kwaye sidibansise i ulawulo OCX posiblmente i umsebenzisi onamava ukusuka debugger akwazi ukubona kwaye igalelo ukusuka umyalelo console.
Indlela enokwenzeka Ukukhuphela i-Visual Basic Express yilo.
Ukuba unqwenela ukugijima kwi-Microstation Connect Edition, kucacile ukuba isicelo kufuneka senze utshintsho kuba ezinye iindlela zelayibrari zatshintshile.
Ukuqhuba i-microstation VBA marcro, kwimeko ye-V8i kwaye kwangoko kwenziwa ngeeNkonzo / iMarcro / uMlawuli weProjekthi. Kwimeko yoDibaniso lweMicrostation, kuya kufuneka ukhethe i-Utilities tab yeRibhoni.
Njengoko ubona, i-macro iyenziwa kodwa ukuba sifuna ukuchaphazela ikhowudi iya kusibonisa iwindi yokukhusela.
Ngaba kunokwenzeka ukuphula iphasiwedi eneVBA?
Umsebenzi wokukhusela iphasiwedi yokuSisiseko esiBonakalayo seZicelo ufuna ukuvelisa ulawulo kunye nokhuseleko kuphuhliso, ke oko akufuneki kube kufanelekile ukubuza malunga nezi zinto kwiwebhusayithi. Nangona kunjalo, ukucinga ukuba isisombululo kungenxa yokuba silibele iphasiwedi okanye ukuba ingcali yonjiniyela inike i-chikungunya kwaye yaxhoma imouse, nantsi isisombululo esisebenzayo usebenzisa umhleli we-hex.
I-VBA yamkelwe ziinkampani zonjiniyela, ke isifinyezo esisetyenzisiweyo ngaphakathi kwekhowudi ukubonisa xa iphasiwedi isetelwe utshintsho kwisicelo esinye ukuya kwesinye. Umzekelo, ukususa isitshixo kwi-Excel VBA macro, isifinyezo sihlala sisisi-DBP = »iphasiwedi», yoFikelelo kwisitshixo yi-DPX = »iphasiwedi». Ukuba sifumana la ntambo, kwaye siyitshintshe ibe yinto efana ne-DBR endaweni ye-DBP, okanye i-DPR endaweni ye-DPX, xa igcinwe, umyalelo ophambili wokhuselo awusayi kubhalwa kakuhle kwaye i-vba iya kuvulwa ngaphandle kokhuseleko.
Oku, usebenzisa i-Hex Editor, kwindlela yokuHlola / uKhenketho, sibhala umtya owufunayo, umzekelo weBDP, kunye neComplete inketho kunye nokugcina i-Case intsebenziswano esebenzayo, njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo.
Ukusebenzisa umhleli we-Hexadecimal (Hex Editor), kungenzeka ukuba uvule i-microstation .mvba isandiso se-macro kwaye wenze utshintsho ngoku landela la manyathelo:
1 Khuphela iXVI32
Oku kunokulayishwa kule dilesi; Kwimeko yam ndiyilanda inguqulo ye-2.55, i-down compressed in zip, kufuneka uyivule kwaye usebenze ifayile xvi32.exe.
2 Vula isicelo se-mvba.
Kuyacetyiswa, ngaphambi kokuvula i-VBA ukwenza ikopi. Jonga ukuba ikhuselwe kangakanani na, apha uyabona amathumbu ayo. Ewe, ekuphela kwento eseleyo kukukhangela esi singqamaniso, sakube sifunyenwe, enye yoonobumba abathathu itshintshelwe ku-X, kwaye iyagcinwa. Ngale nto, i-VBA sele ingakhuselekanga.
Xa ukuvala isicelo siya kubuza ukuba bayayigcina inguqu, kubalulekile ukubonisa ukuba ewe.
Nje ukuba igcinwe, jonga ukuba xa uvula i-VBA ayisabuzeki ngesitshixo, ngenxa yoko kusenokwenzeka ukuba inike entsha. Ukuba umsebenzisi owayelibele iphasiwedi usasebenza kule nkampani, kuya kufuneka uyokumpakaza entloko okanye ubuncinci umnyanzele ukuba ahlawulele iibhiya ngolwesiHlanu; ukuba usweleke kunye ne-chikungunya, sinomnye umzuzu wokuthula.
Ukufumana isichazi seMicrostation VBA (mvba), kubonakala ngathi iphazili elandelayo. Ayifani ne-Excel okanye ukufikelela kodwa ngomzamo wokuqonda kunye nomonde ungayifumana.
Ukulondolozwa okuthetha ukungabinakho ukwazi igama eligqithisiweyo, siya kukunika ikhonkco elifinyeziweyo endaweni yokusebenzisana. Ewe kunjalo, kusoloko kukho umgwebi okanye ophumeleleyo, lowo uya kuhlawuliswa i-XD. Ngenxa yoko kuya kufuneka uthenge ukhuphelo kunye Ikhadi lesikweletu okanye i-Paypal.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ushicilelo lweMicrostation CONNECT-Kuya kufuneka siziqhelanise nojongano olutsha
Post Next Allplan: 4 2017 ezithembisa isiqalo esitshaOkulandelayo »
2 Uphendula "Yaphula igama eligqithisiweyo leMicrostation VBA macro"
UFeliksi Falconi uthi:
Kwimeko yam, andifuni ukwaphula, ukucima okanye ukutshabalalisa, igama elithi vba iphasiwedi, into endiyifunayo kukuba undazise okanye ukhumbule ipassword. Ngaba uyazi ukuba le ndlela iza kuba yintoni?